Sida loo pint Godaddy Si Guji dublad - Masaf Of The Day
Sida loo pint Godaddy Si Guji dublad
Haddaba adiga kugu saabsan si ay u bartaan sida loo pint yihiin GoDaddy in guji dublad in saddex tallaabo fudud.
Ka hor inta aad bilowdo hawsha this aad arki doonaa si loo hubiyo in xidid aad domain ee waxa uu hore u qotomiyey.
Ka dib markii in aad leedahay si ay u tagaan tallaabada 1: aad u baahan tahay in la abuuro diiwaanka Cname a by gabyaya in ay website marka aad dhamaysid aad u baahan tahay si ay u soo qaado goobaha DNS aad domain ee.
Hubi in Cname la www magaca waa la heli karaa, mar aad samayn edit bartilmaameedka in lagu wareejiyey website clickfunnel ee.
Ka dib marka aad la sameeyo si ay u tagaan tallaabada 2: ku dar caadiga ah weeraryahanka by boggan hoos goobaha weeraryahanka, xulashada https://, galaya aad domain, waxaa u fidinno in "permanent" iyo "weeraryahanka kaliya".
Cusboonaysii mar iyo badbaadin.
Hadda waxaan si 3aad iyo tallaabo final: isagoo intaa ku daray in aad domain la Clickfunnels.
Tani waa mid ka mid ah ugu sahlan tan aad leedahay in la sameeyo waa riix ikhtiyaarka "isticmaali domain jira" oo dhan, talooyin aad domain, riix "tallaabo sameeyey" option, wadaajin aad domain la masaf iyo aqoonsiga aad SSL.
wax soo saarka software in uu qaato internetka. Oo kaliya waxaan idinku khali la account a FREE!
software cusub sii dayn doonaa inaad la abuuro:
– Tuuji Page dublad…
– Automated lagacna aad dublad…
– Dublad Daahfurka Product…
– dublad Sales (iyo intergrates w / aad gaadhi shopping jecel!)
– goobaha Xubin…
– Oo badan oo dhan DHEERAAD AH!
Ma rabtaa inaad aragto demo ah software ah in tallaabo? waxaa Eeg halkan
copyright © 2021 · News Theme Pro on Genesis Framework · WordPress · Log in